लोकमान बारे संसदमा अधिकारीको विचाराेत्तेजक मन्तब्य
महाअभियोग सिफारिस समिति तत्काल गठन गर्न माग
प्रकाशित मिति: 2016-10-18
काठमाडौँ । आज विशेष समय लिएर बिशेष कुरा यस सदनमा उठाउनु पर्दा मलाई सन्तोष होइन, ग्लानीको अनुभव भइरहेको छ । बिस्तार बिस्तारै राज्य असफल हुने संभावनातिर गइरहेको महसुस हुँदैछ । लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ भन्ने काखी बजाउनेहरुको हर्षको सिमा छैन । जति कानुन मिच्यो त्यति मिच्नेको समाजमा प्रतिष्ठा बढ्दैछ ।
कानुनको राज्यको सामान्य सिद्धान्त नबुझ्नेहरु यस मुलुकको संबैधानिक पदमा विराजमान छन् र त्यस्ताले कानुनी राज्यको अवधारणालाई दिएको चुनौती छापा, अनलाईन टेलिभिजन रेडियो सबै जसो सञ्चार माध्यममा सचित्र प्रकाशन प्रशारण भइरहेका छन् ।
तरपनि राज्य संयन्त्र एक व्यक्तिको अगाडी नतमस्तक छ र गणतान्त्रिक नेपालमा कानुन भन्दा माथी पनि कोही व्यक्ति हुन सक्छन् भन्ने सूचना जनमानसमा प्रबाहित भइरहेकोछ । मैले उठाउन लागेको कुरा बैयक्तिक हुँदै होइनन् । कुनै ब्यक्ति कानुनलाई नमानेर बस्न सक्छ, अटेर गर्न सक्छ । तर, राज्यका अंगहरु काम गर्न नसक्ने भए ति असफल भए भन्ने सन्देश जान थालेपछि निर्धाहरुको संरक्षण कसरी हुने हो? आजको यक्ष प्रश्न भनेको यो हो ।
संविधानले दिएको यो बिशेषाधिकार सम्पन्न व्यक्ति बिशेषले संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउँदा पनि हामी साँसद र संसदले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ? मिल्दैन । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्नु परेको छ, अख्तियार प्रमुख यतिवेला नेपालमा हुनुहुन्न । संसदलाई अख्तियार प्रमुखको विषयमा जानकारी गराइयोस् ।
आज महिना दिन भन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखआयुक्ताको घरमा तामेल गर्न सकिएको छैन । अदालतको आदेशको खुलमखुला अवज्ञा भएको छ । कानुनी राज्यको उपहास भएको छ । तर, यस बिषयमा समाचार प्रेसित गर्ने सञ्चार माध्यमबाहेक अरु कसैलाई चसो र सरोकार नभएको लाग्न थालेको छ ।
यो सबैले बुझ्न जरुरी छ । निर्धालाई अदालत चहिन्छ । दुखका बेलामा यो संसदमा उपस्थित धेरै शक्तिशाली नेताहरुलाई अदालतले कानुनको आधारमा न्याय दिएको, त्यसको आडमा पद र प्रतिष्ठा जोगिएको छ ।
तर, आज अदालत जुन चौवाटोमा उभिएर सही बाटोमा हिड्न प्रयत्नरत छ । त्यसलाई टेवा दिने की नदिने ? मुल प्रश्न भनेको यो हो । आज हाम्रा अगाडी बिकल्प छँदैछैनन् । न्यायापालिकालाई सक्षम बनाउने नबनाउने, यसलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष भएर काम गर्न दिने नदिने, कानुनी राज्यको अवधारणालाई बलियो पार्ने नपार्ने, यो मात्रै बिकल्प छ ।
आज जे देखिरहेको छ । त्यो अदालत र अख्तियार प्रमुखबीचको झण्झट हो भनेर आँखा चिम्लन मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले एउटा व्यक्तिको म्यादसम्म तामेल गर्न नपाउनु÷नसक्नु भनेको भविश्यप्रति पक्कै राम्रो संकेत गर्दैन । त्यसमाथि संबैधानिक ओहोदाका प्रमुखबाट यस्तो काम गर्नु गराउनु झनै आपत्तिजनक विषय ठहर्नु पर्ने हो । यसलाई यो संसदले गम्भीरताका साथ लिइयोस् । अदालतको गरिमा जोगिनु पर्छ ।
कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले कानुन मान्नु पर्छ ।
संबैधानिक पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउने बाहेक अन्य कुनै अवस्थामा पनि पद छोडाउन सकिंदैन । संविधानले दिएको यो बिशेषाधिकार सम्पन्न व्यक्ति बिशेषले संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउँदा पनि हामी साँसद र संसदले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ? मिल्दैन ।
मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्नु परेको छ, अख्तियार प्रमुख यतिवेला नेपालमा हुनुहुन्न । उहाँको विदा स्वीकृत गर्ने निकाय भनेको पक्कै पनि मन्त्रिपरिषद् होला । संसदलाई अख्तियार प्रमुखको विषयमा जानकारी गराइयोस् ।
उहाँ के कामका लागि विदेश जानु भएको हो ? कति अवधीका लागि जानु भएको हो ? विदा कति अवधीको स्वीकृत गराउनु भएको छ? उहाँ नेपाल कहिलेसम्म फर्की सक्ने हो ? यति लामो अवधी बिदेशमा बस्नु पर्ने प्रयोजन के हो?
आज म सम्मानीय सभामुखज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । संविधानले अनिवार्य रुपमा बनाउनु पर्ने बिशेष समितिहरु जसमा महाअभियोग सिफारिस समितिसमेत पर्छ, यो यतिञ्जेल बन्न सकेको छैन । विगतमा जेसुकै कारण भएपनि अव एक छिन ढिला नगरी महाअभियोग लगायतका विषेश समितिहरु गठन गरियोस् । यति बेला के समेत स्मरण गराउन चाहन्छु भने तीन जना माननीय साँसद ज्यूहरुले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्ध छानविन होस् भन्ने कुरा प्रमाणित गरी संसद सचिवालयमा थन्केर बसेको अवस्था छ ।
कुनै पनि उजुरी माथि छानविन होस् भन्ने बित्तिकै छानविनमा परेका व्यक्ति बारे सत्यतथ्य बुझी निराकरण गर्न पनि महाअभियोग समिति आवश्यक भएको छ । संविधान बमोजिमको यो अधिकार प्रयोग गर्ने संसदीय समिति नै बन्न नसक्नु विल्कुलै उचित भएन । तसर्थ सम्माननीय सभामुखबाट संसद एवं साँसदहरुको संबैधानिक कर्तव्य पालना गराउन यथाशिघ्र उक्त समिति बन्ने बनाउनेतर्फ पाइला चालिनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यौं । राजा वा राजतन्त्र अरु कारणले हामीले समाप्त गर्नुपरेको होइन, कानुन भन्दा कोहीमाथी छैन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा गणतन्त्र स्थापित गरेका हौं । यो शासन पद्धती स्थापित गर्ने संविधान यसै संसदमा उपस्थित अधिकांश सदस्यहरुले दस्तखत गरी पारित गरिएको हो ।
यस्तो संविधानलाई आज सबले देख्ने बुझ्ने गरी चुनौती दिने काम हुँदा संसद चुप लागेर बस्नु हुँदैन । यसको निकास बारे छलफल गर्नुपर्छ । तसर्थ सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरुलाई यो धारणाप्रति संवेदनशील भइ अघि बढ्न अपील गर्छु ।
( कानुनविद्,सांसद अधिकारीले आजको संसद् बैठकमा बिशेष समय लिएर राखेको मन्तब्य )
न्यायिक समितिले कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउने
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको सम्भावना कति ? (अडियो)
सरकारद्वारा सङ्घीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
कर्णाली पर्यटन वर्षलाई सफल पार्न सामुदायिक रेडियोहरु प्रतिवद्ध
विपद व्यवस्थापनको लागि नेपाललाई जापानको ६८ करोड अनुदान सहयोग
एसियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा
एमाले माओवादी एकता घोषणासभा LIVE
नयाँ पार्टी चलाउन ९ सदस्यीय विशेष समिति
कार्यक्रम बिस पछि विहे
स्थानिय तह बिशेष
साझा खबर विहान ६ः०० बजे